Gusset Pouches ụlọ ọrụ na -ebugharị ya na China EVERGREEN
Mpempe Gusset Akụkụ Recyclable.Igwe mgbatị ahụ na -emepụta omimi na ikike maka ngwaahịa. Mkpọ nwere ike mepụta ala ngọngọ. Akụkụ anọ na -enye ohere akara ngwaahịa dị ike.
Nhọrọ anyị ugbu a gụnyere ihe mgbochi na mgbochi kwụrụ ọtọ obere akpa nwere uru ndị a:
Mpempe Gusset Akụkụ Recyclable.Nhazi siri ike nke akpa akara quad na -eme ka ọ bụrụ ihe na -adọrọ mmasị na shelf ụlọ ahịa.
Obere akpa gusset dị obere igbe, nke pụtara na ha na-eburu obere oghere na shelf. Akpa ndị a bụ nhọrọ a ma ama maka ala ma ọ bụ kọfị kọfị na nkwakọ ngwaahịa nut. Akụkụ gusset gbasaa mgbe ejiri ngwongwo jupụta ya, mee ka ọ dị mfe iguzo ọtọ na shelf. Oghere mkpọchi bụkwa ihe dị mma maka akpa ndị a iji nweta ihe ngosi shelf na nnukwu ụlọ ahịa. Ọ nwere ikike magburu onwe ya maka imeju ihe na nnukwu ibi akwụkwọ.
A na -eji akpa akpa Gusset Recyclable Side emegharị ebe niile maka ịkwakọ nri na ihe akọrọ dịka mkpụrụ, kuki na agwa kọfị. Mana obere akpa ndị a na -emekwa nnukwu ihe nkwakọ ngwaahịa maka nri oyi kpọnwụrụ na ngwaahịa mara mma. Njupụta na njirimara omenala dị na akpa gusset anyị na -enye nhọrọ ahaziri iche iji kwado ụkpụrụ izizi nke akara gị setịpụrụ.
Gussets nwere akụkụ abụọ na-abawanye olu ndochi akpa nke na-enye ohere ka obere akpa jide ngwaahịa na ibu karịa. Nke a na -agbakwụnyekwu mgbanwe mgbe ị na -eme ngwaahịa buru ibu ma ọ bụ nke adịghị mma.
Ihe mmịfe dị n'elu
Site na mmechi dị elu, ọ na -enyere ndị ahịa aka ịdị mma maka imepe na imechi nnukwu usoro, yana egwu doro anya.
Nke gara aga: Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa Recyclable
Osote: Mpempe akwụkwọ nkwụnye akpaghachị
Gusset n'akụkụ & obere akpa akara Quad
3 n'akụkụ akara & agụụ pouches/agụụ Plasti ...